Fitaovana ho an'ny tavoahangy Perfume
Paikadin'ny fampandrosoana maharitra
Mitombo ny fangatahana maharitra
Sanda maharitra maharitra amin'ny EBI
Tavoahangy shampoo an'ny varimbazaha - Ny revolisiona Bio Plastika vaovao
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-10-25
Tavoahangy shampoo an'ny varimbazaha varimbazaha dia faly izahay fa afaka mitondra vokatra voajanahary azonao ampiasaina amin'ny mpanjifanao amin'ny famolavolana miavaka amin'ny famonosana sisiny. Izahay dia mitazona anao mialoha ny lalao miaraka amin'ny hevitray vaovao momba ny fomba hitondrana vokatra kalitao amin'ny mpanjifanao na dia mampihena ny ...
Raha ny tatitra sy ny angom-baovao, ny sandan'ny tsenan'ireo kaontenera aerosol dia hahatratra USD 13,17 miliara amin'ny 2027
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-10-11
Ny fitomboan'ny fangatahana amin'ny fikarakarana manokana, fikarakarana trano ary indostrian'ny fahasalamana dia nahatonga ny filan'ny tsena. Tatitra sy angon-drakitra Tushar Rajput +1 212-710-1370 Alefaso imailaka izahay eto Mitsidika anay amin'ny media sosialy: FacebookTwitterLinkedIn EIN Presswire laharam-pahamehana no mangarahara loharano. Tsy avelanay ny tsy tra ...
Ny Macron an'i Frantsa dia nihantsy an'i Etazonia, na dia ho an'ireo mpitsangatsangana aza, filokana lehibe izany
Ho an'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron, ny fifanarahana tsy nahomby tamin'ny sambo mpisitrika miaraka amin'i Aostralia dia mampiseho fa ny firaisan'ny OTAN dia nalemy noho ny tsy fahatokisan-tena. Nahazo filokana lehibe ny filoham-pirenena PARIS-Emmanuel Macron. Nanome toromarika ny minisitry ny raharaham-bahiny izy hampiasa fiteny mazàna tsy misy ifandraisany amin'ny diplaomasia, mainka moa fa ny diplaomaty ...
Carolina A. Herrera amin'ny menaka manitra sy ny hanitry ny fahombiazana
Nandritra ny ankamaroan'ny marika reniny nandritra ny 20 taona mahery, i Carolina A. Herrera dia nirotsaka tamin'ny famolavolana menaka manitra, famonosana ary fivarotana menaka manitra toy ny Good Girl, CH, Herrera Confidential ary 212. Carolina Jr .. Fantatra izy indraindray ary efa nandray anjara betsaka tamin'ny is ...
Mety hampihena ny toekarena Koreana ny fiakaran'ny vidim-bary
Na dia naneho fambara aza ny sehatra tsy miankina sy indostrialy ao amin'ny firenena fa tsy maintsy miverina amin'ny laoniny avy amin'ny voka-dratsin'ny areti-mandringana COVID-19, ny fiakaran'ny vidin'ny vidin-javatra dia manery ny orinasa Koreana Tatsimo. Nilaza ny mpandinika sy ny mpahay toekarena ny alatsinainy teo fa misy fiantraikany ara-toekarena ny fiakarany ...
Inona no atao hoe Aluminium?
Aluminium (Aluminium) - vy fotsy, volafotsy malefaka, voamarika noho ny fahazavana, fitaratra avo lenta, fitondra hafanana be, fitondra herinaratra avo lenta, tsy fanapoizinana ary fanoherana ny harafoana. Ny aliminioma no singa metaly be indrindra, misy 1/12 amin'ny cr ...
Ny orinasan-tsambo dia hampiakatra ny vidiny indray amin'ny volana aogositra
Tamin'ny fahatongavan'ny vanim-potoana fara tampony sy ny fitohizan'ny seranan-tsambo lehibe manerantany, nanjary korontana ny seranan-tsambo tany Eropa sy Amerika, ary ny seranan-tsambo telo lehibe tao Antwerp, Rotterdam ary Hamburg dia nianjera niaraka! Ny Drewry World Container Index dia mampiseho ...
Fametrahana orinasa teknolojia eco, mifantoka amin'ny fonosana eco friendly
Ny fitehirizana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana no làlan'ny fampandrosoana nasionaly, ary ny toekarena boribory no ifantohan'ny indostria manerantany. Ny revolisiona maitso miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho lohahevitra no ho lohahevitra lehibe ho an'ireo orinasa sinoa. Hatramin'ny nananganana azy, EBI ...
Maninona no mihamaro ny mpanjifa sigara mifidy fonosana fantsona aluminium
Tao anatin'izay taona faramparany, ny marika sigara lehibe dia nandefa sigara fantsom-boaloboka misy alimo. Ny fonosana fantsom-boaloboka dia fanodinana ny fonosana boaty hazo nentim-paharazana. Ny fantsona aliminioma mihitsy dia mora entina ary azo amidy tsy miankina. Izy io dia manana fampiasa miavaka ary especi ...
Ahoana ny fomba hampivoarana ny zava-pisotro anao?
Ao amin'ny tsenan'ny indostrian'ny fonosana vokatra ho an'ny mpanjifa (CPG) izay mitombo haingana dia mitombo hatrany ny ahiahin'ireo mpandray anjara sy mpanjifa. Manoloana izany fanamby izany, ny tompona marika dia mampiasa vola amin'ny rafitra fanangonana sy fanodinana mba hampihenana io fako io. Na izany aza, marika vitsivitsy no mandray a ...